Zobungoma - uphawu abasebukhosini, amandla bobukhosi, lombusi noma kwesikhulu, okuyinto Sekuyisikhathi eside esetshenziswa abanikazi kahle kwemandla embuso. Kuzwe ngalinye, lezi zibonakaliso ziyafana, zingabantu intonga, umqhele futhi zikhipha.
Indlela zobungoma benza
Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa has ivelaphi endulo, kungashiwo kushiwo ngokungananazi. Ngakho, ngukhokho umqhele kwaba Wreath umfire, okuyinto uhlezi phezu kwenhloko yembuzi, Yokuwina imincintiswano. Kamuva waba uphawu udumo, okuyinto lalungiselela wamasosha noma isikhulu abase zihlukaniswa ukuzisekela lapho besenkonzweni. Kusukela leli siko sekukhona umqhele, okuyinto iye yatha- eYurophu kakade ekuqaleni kweNkathi Ephakathi.
zobungoma Russian imperial babe zikanokusho ikakhulukazi. Phakathi kwabo kuyinto ngemfanelo emangalisayo kakhulu - umqhele lasendulo ephakathi, okuyinto, Ngokwezinye izazi-mlando, umbusi WaseByzantium uConstantine azithumela kuya Kievan isikhulu uVladimir Monomakh. Kukhona inguqulo zazo, kanye Umqhele Prince futhi wathola intonga.
Lesi sibaluli kahle kwemandla embuso wabonakala eminyakeni eminingi edlule. Intonga yobukhosi, ngokusho legend, wasebenzisa abakhileyo Olympus, uZeyusi Hera, ngubani yanquma ukulingisa abanye ababusi lasendulo nezikhulu, bakubheka njengobuthakathaka uphawu esisemqoka isithunzi. Kuyathakazelisa, kodwa obaluleke kakhulu ezweni - sababusi - scepters ayisetshenziswa. Nokho, kakade Ephakathi lalisetshenziswa lonke elaseYurophu, kuhlanganise eRussia, lapho, ngesikhathi wedding yamakhosi zobungoma esetshenziswa. Kwenzekani Emen ngakho kubonisa indaba Gorseya ezithile, owabona wokugcotshwa Fyodor Ivanovich.
Hhayi ngaphandle izimpawu kancane esiphawulekayo amandla. Kukhona futhi hhayi ethandwa kakhulu zobungoma bobukhosi, kuhlanganise zingamagugu angamafa, sabres, izinkemba kanye enhlobonhlobo. Zazenziwe negolide, amatshe ayigugu, ezifana emeralds, ngeyamarubi futhi ngamasafire. Ezinye zalezi amagugu abadumile ngempela ngenxa yobukhulu balo umxhwele nobuhle Amazing. AmaNgisi umqhele wobukhosi, isibonelo, has a irubi esikhulu kakhulu, okuyinto wethiwa "Black Prince".
Lapho esetshenziswa zobungoma
Letimphawu isimo amandla nababusi nezikhulu ezibalulekile egqoka phakathi imicimbi ehlukahlukene. ISilo, isibonelo, wasebenzisa zobungoma yabo ngesikhathi emihlanganweni neemphathiswa zangaphandle eziphezulu noma okukhiphayo ezibalulekile. Noma kunjalo, kwakukhona amagugu ekhethekile asetshenziswa kuphela ezimweni ezithile, njengabaphostoli Omkhulu-Imperial Crown, okuyinto ezigugile ngaphandle ngesikhathi wokugcotshwa yenkosi abasebukhosini, indlovukazi noma inkosi.
Ngo mithi British kukhona ngisho idayimane tiara ekhethekile, lapho iNdlovukazi ubophekile ukugqoka ekuhambeleni kwamanye amazwe ezithengisa ekhethekile ukuthi ngisho kuphawulwe olandelwayo zamanxusa. Kwaba Elizabeth wakhe II egqoka ekuhambeleni kwakhe esemthethweni eRussia.
Amatshwayo eziphawuleka kakhulu kwamandla zadalwa engaphezu kweyikhulu edlule, kungaba cishe ishiwo zonke zobungoma emangalisayo. Lithini ofuna ukufakaza kwabo?
Iqiniso liwukuthi, uma kubhekwa ukubaluleka kanye endulo kwezinye izimpawu kwamandla, kabasebabili esetshenziswa namuhla, babeka ngayo eminyuziyamu. Ngokwesibonelo, abanye amagugu ezibalulekile ichonywe Museum wezwe laseFrance - the Louvre. E Copenhagen, le Rosenburg castle ungabona ingcebo yamakhosi Danish. Ngisho eRussia, ungabona eminye zobungoma bobukhosi agcinwa le Armoury, ukuba eqondile - e iDiamond Isikhwama, okuyinto ungavakashela ubani.
Izimpawu kwamandla kusukela ezikhathini zasendulo ziye zabizwa ngokuthi ukuba bakhombise amandla wombuso kanye neSilo yena, bese uqhubeka impikiswano mlando eziningi, ngoba eziningi eziyimfihlakalo ngakho uzigcine ufihlekile eminyaka. Zobungoma - ukuthi zimelela amandla, abaphila manje akuyona ungaqiniseki, futhi izohlala ingashintshiwe isikhathi eside.
Ibutho zabesifazane yokufa kweMpi Yezwe Yokuqala. Umlando Ibutho yabesifazane
Inani Battle of Kulikov Russia balandela umlando
Igama ekusebenzeni ayehlasela German zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa - kuze kufike kuzoveza ngokoqobo uhlelo?
Albert Popkov: Biography. History of the project 'Odnoklassniki "
Nebitume * laba asphalt. Brands nezakhiwo ibitume
Kusukela lokho Nystatin ephatha. Yokusetshenziswa
Mullein abavamile. Ukusetshenziswa zokupheka kanye ayelapha
Emsebenzini Political: izimbangela, izinhlobo, izinkinga, imiphumela, izibonelo
Ibhajethi engenayo - elithile yesimo sezomnotho kwanoma yiliphi ilizwe
Uhlolojikelele lomsindo Supra PAS-3909
Isenzo lephocako Indlela futhi Subjunctive (Tale)
Uyini umgomo? umsebenzi engiwuthandayo
Indlela yokwenza homeopathic ikhambi "Ukuphelelwa Umsebenzi-kid": ukubuyekezwa, izinkomba kanye umthamo
LCD "yeGolden Triangle", eMoscow: izibuyekezo, izithombe, isakhiwo